Unxibelelwano lweNdlela yokuSebenza | Martech Zone
Unxibelelwano lweNdlela yokuSebenza
NgoLwesibini, nge-10 kaDisemba ngo-2013 NgoLwesibini, Januwari 21, 2014 USavannah Marie
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ngezantsi ndibekho kuyo yonke indawo kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo. Izibalo zihlala ziyimfuneko ukongeza ukuthembeka, kwaye i-infographics yenza kube lula ukophula idatha ebinokuba nzima kakhulu kumfundi ophakathi. Ngokusebenzisa i-infographics, idatha iya kuba yemfundo kwaye kumnandi ukuyifunda.
Inkqubela phambili ye-infographic
Njengoko u-2013 sele eza kufikelela esiphelweni, ii-infographics ziphinde zitshintshe indlela abantu abalutya ngayo ulwazi. Ngoku, i-infographics ayiqulathwanga nje ngemibala eqaqambileyo, iifonti ezibambisa amehlo kunye noyilo olucekeceke. Ezinye, ngokufanelekileyo zibizwa ngokuba zii-infographics ezisebenzisanayo, kubandakanya oopopayi, amakhonkco kunye nezinye izinto ezenza kube lula kubantu ukuba bathathe iinkcukacha ze-infographic uqobo. Ezi infographics ziphambili zikwalatha abantu kwicala apho banokufumana khona umxholo owongezelelweyo ofanelekileyo. Qhubeka ufunda ukuze ufunde izizathu ezimbalwa zokubenza babe yinxalenye yezicwangciso zokuthengisa umxholo wakho wexesha elizayo.
Ngenxa yokuba ii-infographics ezisebenzisanayo zibonakala zibonakala, abantu banokucinga ukuba izinto zoyilo zinzima kakhulu. Ngethamsanqa, itekhnoloji enje ngoyilo oluphendulayo incedisile ekwenzeni ukuba ii-infographics ezinxibelelanayo zilula ukuyila, kwaye ezinye iinkqubo ziyenza isebenze ngakumbi nokuba uzama ukuyakha ngaphandle kwemvelaphi yokufaka iikhowudi kwikhompyuter.
Banokukunceda uphawu lwakho okanye uMyalezo uye kwiNtsholongwane
Ungacinga ngemizekelo embalwa yeevidiyo zeYouTube okanye iimemes ezazingaviwa ngolunye usuku kwaye ngequbuliso kuthethwe ngazo ngumntu wonke ukusuka kubusuku bokuthetha bonisa inginginya kubo bonke abahlobo bakho kwimidiya yoluntu. Rhoqo, ukwanda kweziganeko ezinjalo kunxulumene nendlela umxholo uhanjiswa ngayo.
Olunye uncedo lwee-infographics ezisebenzisanayo kukuba zikuvumela ukuba usebenzise amagama kunye nokuhambisa imifanekiso ukuqhuba inqaku ekhaya. Ukuba abantu abaneleyo bayakuqaphela, umyalezo wakho okanye igama linokuba semilonyeni yomntu wonke ngeentsuku nje. Kwesinye isihlandlo, amatshantliziyo eSyria asebenzise i-infographic yokubonisa indawo kunye neentlobo zokuchasana okungenabundlobongela, ezibandakanya imibala emihle, ubume obukholisayo kunye nonxibelelwano oluncedo oluchaze iinzame zezizathu ezithile ngakumbi.
Banceda ekuGcineni uLwazi
Uninzi lwee-infographics ezisebenzisanayo ziyilelwe ukuba iinxalenye zabasebenzisi zisongele, zixhotyiswe ngeendawo ezandayo xa zichukunyiswa ngesikhombisi semouse. Ngaphandle kokunceda ekubambeni ingqalelo, ezi mpawu ziphucula amathuba abantu abaza kuhlala kwaye bafunde, kunokuba ucofe kwenye indawo. I-infographics esebenzisana nayo ivumela umbono ukuba ulawule amava abo kunye nenqanaba abafunda ngalo. I-CJ Pony Parts yenze i-infographic esebenzayo enikezelwe kumvelisi kwishishini leemoto, uCarroll Shelby, kunye nokuphumelela kwakhe kwisithsaba, uShelby Cobra. Le infographic ivumela umbukeli ukuba "aqhube" uShelby Cobra kwihlabathi liphela.
Ukudibana kunokuba luncedo ukuba uzama ukudlulisa umahluko phakathi kobungakanani. Ukuba abasebenzisi banokuhambisa imouse yabo kwinxalenye yomzobo kwaye bayibukele ikwandisa ukumela inani elithile, inokwenza ukuba idatha ikwazi ukubambelela kwimemori, kunokuba ilibaleke msinya.
Banokukunceda ukuba uvelise iiNkokeli
Ngaba ukhe wacinga ngokusebenzisa i-infographic esebenzayo njengesixhobo sokuthengisa? Inokuba yindlela yexesha elizayo, ngakumbi kubantu abathengisa izinto ezinokuziswa kubathengi kwangoko, ezinje ngee-e. Nokuba uzama ukufumana abantu abanomdla kwingqokelela yeengcebiso ezikhawulezileyo zokufumana umsebenzi ogqibeleleyo okanye ufuna ukukhulisa inani labantu ababhalisela umxholo webhlog yakho yeprimiyamu, i-infographic esebenzayo inokuvumela abantu bazi ukuba balindele ntoni xa bathenga into .
Vumela i-infographic ilingise ithoni kunye nesitayile somxholo ofunyenwe kwizinto ozithengisayo, kwaye uqiniseke ukongeza ikhonkco elihambisa abantu ngqo kwiphepha apho banokuthenga khona into.
Ungasiguqula esi sicwangciso kancinane ngokudibanisa into edibeneyo evumela umntu ukuba asayine kwincwadana yakho ngonqakrazo olunye nje. Zama oku xa usandula ukwazisa i-infographic igcwele iinyani ezinomdla, kwaye ufuna ukuqinisekisa ukuba ababukeli bayayazi indlela yokufumana ngakumbi uhlobo olunye lomxholo.
Inkampani ebonelela nge-inshurensi yezempilo kubantu bakwiiPhilippines nayo ixhomekeke kwi-infographic esebenzayo ukuze ilumkise ukuba kungabiza malini ukugula njengomntu ongakhuselwanga. Injongo yayikukubhenela kubantu abanokuba nethemba lokuba bahlala bephilile kwaye bathathe isigqibo sokuba iindleko ze-inshurensi yezempilo zikhulu kakhulu ukuba bangazithwala. Ngokuthelekisa ngononophelo iindleko ezinxulumene nezifo eziphambili xa kuthelekiswa ne-inshurensi yezempilo, umyili wayenethemba ngokucacileyo lokutshintsha umbono wokuba i-inshurensi yempilo yinkcitho engeyomfuneko.
Unokucwangcisa ukwenza into efanayo ukufikelela kubathengi emva kokungaqondani okuncinci okanye ukuqaqambisa izibonelelo ezithile zeemveliso zakho ebezinokungaziwa ngaphambili kuninzi lwabaphulaphuli bakho.
Imizekelo engentla zizizathu nje ezimbalwa zokuba kububulumko ukusebenzisa imizobo enxibelelanayo kwizicwangciso zakho zentengiso ezizayo. Abanye abathengisi sele bezisebenzisile ukufumana iziphumo ezintle, kwaye ukubalasela kwabo kubonakala ngathi kuya kuhlala kunyuka kwiinyanga ezizayo.
tags: I-infographics esebenzayourhweboAmanani entengisoiintsingiselo
USavannah Marie ngumbhali ozimeleyo kunye nentandokazi yokuthengisa kwi-Intanethi. Unomdla wokulandela i-SEO, ukuthengisa kwi-Intanethi kunye neendlela zentlalo. Mlandele phambili Twitter kwaye Google.
I-AdTruth: Ukwamkelwa kwabaphulaphuli kwiHlabathi liphela
Amandla eMigodi yeDatha kunye neNkqubo yokuXhasa iZigqibo
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2013 ngo-12: 08 AM
"Ifoto ixabisa iwaka lamagama!"
Ngomhla wama-12 ku-Disemba 2013 ngo-1: 43 PM
Enkosi ngokwabelana ngenqaku! Ulwazi lweemifanekiso zezona ndlela zilungileyo zokujika abafundi babe zizikena